Ivesi yomthandazo Discover Discover Discover Online ▷ ➡️
Kule nqaku siza kuthetha ngamandla omthandazo ngoku umthandazo wevesi yebhayibhile kunye nendlela umpostile ngamnye amele ngayo igama ezincwadini zakhe ukuhlonipha ubomi bukaYesu Krestu.
Ngokuthandaza ngokholo, ithemba kunye nethemba siza kuba sinxibelelana noThixo
1 Umthandazo weevesi ezivela kwiBhayibhile eNgcwele
2 Umthandazo weevesi
2.1 Singathandaza sonke
2.2 UYesu unamandla
2.3 Umthandazo uzisa impiliso
2.4 Ukuba uyathandaza uza kubona imimangaliso
2.5 Buza, khangela, fowuna
Umthandazo weevesi ezivela kwiBhayibhile eNgcwele
Ekuqaleni, xa sithandaza sibeka zonke iingxaki zethu kuThixo, sifuna intuthuzelo kaThixo, isiqabu kunye nokuphilisa ngamazwi akhe. Uya kuhlala esamkela njengotata olungileyo nononophelo nabantwana bakhe abakhuselayo, ke akufuneki silibale amazwi akhe.
Ngokufanayo, kubalulekile ukugxininisa ukuba kwizibhalo zeTestamente eNdala kwiindinyana ezininzi bathetha nathi ngokubaluleka komthandazo, nendlela esinokufikelela ngayo kuThixo, kwaye sazi indlela yokuthandazela izicelo zethu kunye nezinto esizithandayo. Kananjalo nokuba nombulelo ngendawo kunye neentsikelelo ezisinika zona.
Ngendlela efanayo, uThixo ungutata onobubele osoloko esondele kuye ngamnye wethu, osimamelayo nosinceda kuwo wonke umzuzu wobomi bethu, kwaye afumane ukukhululeka kwiingxaki zethu, nangona ngamanye amaxesha zibonakala zinzima kakhulu, uhlala enika isisombululo okanye induduzo yakhe.
Ukuthandaza, akuyomfuneko ukuba uye ecaweni. Sivela emakhayeni ethu sinokuncokola noThixo iNkosi yethu. Ngomthandazo, eyindlela yethu ngqo yokuncokola. Yi-Wi-Fi kunye nesibhakabhaka. Kwangelo xesha, kufuneka sikwenze iintliziyo zethu zisesandleni, sinyanisekile kwaye sithobekile, sizinikele emzimbeni, engqondweni nasemphefumlweni. Emva koko siyakumema ukuba uphonononge inqaku lethu kwi Isikrweqe sikaThixo
Kwindinyana zebhayibhile, siya kufumana iincwadi ezibhalwe ngabapostile abohlukeneyo apho bathetha khona ngendlela uYesu Krestu, unyana kaThixo, awayebafundisa ngayo kwaye edibanisa nokholo ngomthandazo awufakwa nguyise kuye yonke imihla.
Ngokunjalo, kwibhayibhile bathetha ngazo zonke iimfundiso zikaYesu kubafundi bakhe abathi kamva bazibonakalisa kwiitestamente zabo, sizakubonisa ukuba zeziphi iivesi abathetha ngazo ngamandla omthandazo, ukubaluleka kwawo nendlela yokwenza ngokuchanekileyo.
Ngethuba nje sinokholo, imithandazo yethu iya kuviwa nguThixo wethu, ngoko kufuneka ugcine ithemba lakho liphezulu kwaye uqhubeke uthandaza, unethemba lokuba uyaviwa kwaye imithandazo yakho iya kuphendulwa.
Ngendlela efanayo apho sithandaza kufuneka sibulele
UEliya wayengumntu obuthathaka njengathi. Wathandaza ngokunyanisekileyo ukuba ingani, kwaye ayana emhlabeni iminyaka emithathu enesiqingatha. Waphinda wathandaza, laza izulu lanika imvula yalo, umhlaba wavelisa iziqhamo zawo.
(Yakobi 5: 17-18)
Kwangokunjalo, kufuneka sifunde ukubuza kuThixo, ayizukuphendulwa yonke iminqweno yethu kwangoko, kuba ayisiyiyo yodwa enkonzweni kaThixo, abazalwana bethu banokufuna intuthuzelo ngakumbi, khumbula ukuhlala usenza isibongozo sakho ngesisa indlela kwaye uhlala edumisa uYesu Kristu noThixo ngokwakhe.
Nantoni na eniyicela ngegama lam ndiya kuyenza; Uya kuzukiswa uYise ngoNyana. Nantoni na eniyicela ngegama lam ndiya kuyenza.
(UYohane 14: 13-14)
Umthandazo uzisa impiliso
Xa sifuna intuthuzelo kaThixo, uya kusimamela, ukuba sinayo nayiphi na impilo, imali, okanye uthando, okanye isicelo sethu sililungu losapho okanye abahlobo, uyakuhlala esimamela lo gama nje umthandazo wethu uhlawulisiwe ngothando nokuthobeka, ngokufanayo, uya kuziphendula izikhungo zethu xa ikukuthanda kwakhe kunye nomzuzu ofanelekileyo.
Ngoko ke vumani izono omnye komnye, nithandazelane, ukuze niphiliswe. Umthandazo welungisa unamandla kwaye uyasebenza.
(Yakobi 5: 16)
Ukuba uyathandaza uza kubona imimangaliso
Ke ngoko, xa sithandaza kufuneka sibonise ukuba izicelo zethu zinje ngohlobo lokuba uThixo azi ukuba silindele ntoni kuye, ngokunjalo izicelo zethu kufuneka zinikwe intobeko enkulu kwaye silindele uyilo lweNkosi yethu, samkele ukuthanda kwayo kuba ilungile kwaye inobubele. abantwana bakhe.
Ndiyakuqinisekisa ukuba, ukuba unokholo kwaye ungathandabuzi (…), uyakukwazi ukuthi kule ntaba: “Phuma apho uziphose elwandle!”, Kwaye kuyakwenzeka. Ukuba uyakholwa, uya kufumana nantoni na oyicelayo ngomthandazo.
(UMateyu 21: 21-22)
Buza, khangela, fowuna
Kwangokunjalo, xa uthandazayo ukwiingxoxo zakho zangasese noThixo, musa ukuba nosizi mxelele yonke into oyifunayo ngothando, cela into eyimfuneko kuwe nakwintsapho yakho nakwizihlobo azokunika zona ukusukela Uyayazi into oyifunayo, ungabi nazintloni xa uthandaza kuba le yindlela yokuyeka umphunga kwaye ungene kwinqwelomoya apho ukunye noThixo kuphela.
Cela kwaye uya kunikwa; funani, nofumana; nkqonkqozani, kwaye niya kuvulelwa.
Ke ngoko, ungoyiki ukuthandaza, kule minyaka idlulileyo ibe lolona nxibelelwano lusebenzayo, kunye nesixhobo esithe ngqo noThixo, shiya iinkolelo ezimbi, kunye nokusilela kokholo, uThixo uhlala ecaleni kwethu, esithatha ngokubamba izandla nokusikhokela thina kwindlela yokukhanya nothando.
Ke ngoko, thandaza kwaye uthandaze kakhulu, ungaziceli wena wedwa, kodwa usapho lwakho kunye nabahlobo bakho, baxelele ngamava akho xa uthetha noThixo, uthathe inxaxheba ekwaziseni ukholo kwimeko-bume yakho, ufane noYesu Krestu nabapostile bakhe usasaze ukholo kuyo yonke indawo el mundo.
Kodwa ngaphezu kwako konke, ungayeki ukuthandaza nokubulela uThixo, khumbula ukuba uhlala ecaleni kwethu. Funa ubukho bakhe, umbambe ngesandla esiya kukukhokelela kubomi obuzele yimpumelelo kunye nolonwabo olupheleleyo.Funda ibhayibhile kuyo uyakufumana intuthuzelo kunye nemithandazo yokuxhasa ngaphambi kobunzima bakho.
Siyakukhumbuza ukuba imithandazo ayisiyokubuza kuphela, ikwabulela uThixo ngayo yonke into asenzela yona. Kuya kufuneka sifundise abantwana bethu ukuba nombulelo kuThixo, bamhlonele kwaye bamhlonele, bahlala besasaza ilizwi lakhe lokholo.